Ii-FAQs | Imveliso zeCongzhou Kuntai Metal zeMveliso yoNyaka, Co, Ltd.
Ivalve yentsimbi engenasiseko
I-MINI Ball Valve
I-1PC / 2PC / 3PC Valve yeBhola
Ivelu yeBlanged Ball
I-3-indlela yeBhola yeVola
Ivelu yeBhola yokuThobela
Izinto zokulungisa iintsimbi
I-Stainless Steel Camlock / Ukutshata ngokukhawuleza
IiValvu eziCocekileyo kunye noCingo
Ewe, sinako ukubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya iZatifikethi zoHlalutyo / ukuNgqinelana; I-inshurensi; Imvelaphi, kunye namanye amaxwebhu okuthumela kwelinye ilizwe apho kufuneka khona.
Kwiisampulu, ixesha elikhokelayo limalunga neentsuku ezisi-7. Kwimveliso yobuninzi, ixesha elikhokelayo ziintsuku ezili-15-45 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela yeemveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu okuhola awasebenzi kunye nomhla wakho wokugqibela, nceda ugqithise iimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
Ungenza intlawulo kwiakhawunti yethu yebhanki:
Ngokubanzi samkela iipesenti ezingama-30% T / T kwangaphambili, ama-70% T / T okushiyekileyo ngaphambi kokuba kuthunyelwe.
Okanye L / C ngokubona.
Ezinye iimeko zokuhlawula ziyaxoxisana.
Ewe sisoloko sisebenzisa ukupakisha okusemgangathweni okukhuphela okusemgangathweni, njengeepaneli zomgangatho oqhelekileyo okanye iimeko. Ukupakishwa kweengcali kunye neemfuno zokupakisha ezingekho mgangathweni ziyafumaneka kodwa mhlawumbi kungene imali eyongezelelweyo.
Ukuhanjiswa okukhuselekileyo kweemveliso
IFowuni0086-13393391989 / 0086-13333275819
I-ADDRESSWang Jia Pu Xiang Yu Zhuang Zi Cun, Cang County, Cangzhou City, Hebei, China
08:30 ukuya 17:30